बाढीको कुरा गर्दा डाँको छोडेर रोए डा. केसी | Nagarik News - Nepal Republic Media
बाढीको कुरा गर्दा डाँको छोडेर रोए डा. केसी
३१ श्रावण २०७४ २ मिनेट पाठ
काठमाडौं- अनशनकै बीचमा ठूलो बाढीपहिरोबाट देशभर जनधनको क्षति भएको खबर सुनेसँगै डा. गोविन्द केसी अचानक डाँको छाडेर रोए। यसअघि केसीले देशविदेशमा आइपर्ने जस्तोसुकै मानवीय विपत्तिमा पुगेर निःशुल्क उपचार तथा राहत वितरण गर्दै आएका थिए।
शनिबार बाढीको खबर सुने पनि यति ठूलो जनधनको क्षति भएको जानकारी उनलाई गराइएको थियो। भेटका क्रममा केही चिकित्सकले देशमा यति ठूलो संकट आइपर्‍यो भनेको सुनेपछि डा. केसीले बाढीको क्षतिबारे जिज्ञासा राखेका थिए। पछि पत्रपत्रिकामा छापिएका तस्बिरसमेत पल्टाएर हेरेपछि उनी निकै गम्भीर बनेका थिए।
'मरेको बच्चा गाड्ने ठाउँ पनि नपाएर बगाउनुपर्‍यो भन्ने सुनाइदिएछन् साँझ, फेरि रुनु भएछ,' उनका भाइ किशोर केसीले भने। शनिबार विपत्तिको खबर आएपछि कतिपयले अनशन स्थगित गर्नसमेत आग्रह गरेका थिए। त्यति बेला डा. केसीले उठेर पनि दुईतीन साता त्यहाँ जान नसक्ने भन्दै अनशनलाई निरन्तरता दिने बताएका थिए ।
'उहाँले सप्तरी सिराहतिर डुबान भइरहन्छ सामान्य हो भन्ने ठान्नुभएको रहेछ,' किशोरले भने, '८० भन्दा बढी मरेर ३० भन्दा बढी हराइरहेका छन् भन्ने सबै सुनाएपछि डाँको छोडेर रुनुभयो।' डा. केसी रुन थालेपछि मुटुको गति २ सयभन्दा माथि गएसँगै सबैले सम्झाएका थिए। रुन छाडेपछि पनि राति अबेरसम्म ननिदाईकनै सोचमग्न भएर पल्टिएको र मुटुको चालमा समेत परिवर्तन देखिइरहेको सहयोगीले बताएका छन्।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७४ ०७:४२ मंगलबार
घरायसी ग्राहकमा स्मार्ट मिटर जडान
‘हेर यो मुटुमा चिरा पर्‍या छ’ काे म्युजिक भिडियाे सार्वजनिक, चिरञ्जवी र रोशनीको अभिनय
बल्ल पूर्णता पायो काँग्रेसको केन्द्रीय विभागले
धरानमा ४ जना भारतीय आर्मीसहित ९ जनामा संक्रमण पुष्टि
बुढीगंगामा बाढी, एक जना बेपत्ता
बिरा गडाल २६ श्रावण २०७७ सोमबार
‘हामी के खाएर बाच्ने सरकार ?’
सरिता श्रेष्ठ २६ श्रावण २०७७ सोमबार
छाउगोठमै जलिन बसन्ती
नगेन्द्र उपाध्याय २६ श्रावण २०७७ सोमबार
नाइजरमा छ जना फ्रान्सेली नागरिकको हत्या
नाइजरमा छ जना फ्रान्सेली नागरिकको हत्या भएको समाचारमा जनाइएको छ। ती मारिएका नागरिक फ्रान्सका सहायताकर्मी भएको बताइएको छ।
भारतीय सेनाका ४ जना आर्मीसहित धरानका ९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। धरान १७स्थित एन्फा क्वारेन्टिनमा रहेका तथा समुदायस्तरमा स्वाव संलकन गरेर पिसिआर गर्ने क्रममा थप ९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको विधानबमोजिम केन्द्रीय विभागमा आइतबार उपप्रमुख, सचिव र सदस्य मनोनयन गरी पूर्णता दिएका छन्।
आइतबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षासँगै बुढीगंगा नदीमा आएको बाढीले बाजुराको मालिका नगरपालिका र गौमुल गाउँपालिकामा ठूूलो क्षति पुु¥याएको छ ।